युएईमा हुनुहुन्छ? कमेन्ट गर्दा विचार गर्नुस: २ लाख ५० हजार देखि पाँच लाख दिर्हामसम्म जरिवाना तिर्न पर्ला – नेपाली सूर्य
युएईमा हुनुहुन्छ? कमेन्ट गर्दा विचार गर्नुस: २ लाख ५० हजार देखि पाँच लाख दिर्हामसम्म जरिवाना तिर्न पर्ला
October 19, 2020 October 19, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on युएईमा हुनुहुन्छ? कमेन्ट गर्दा विचार गर्नुस: २ लाख ५० हजार देखि पाँच लाख दिर्हामसम्म जरिवाना तिर्न पर्ला
काठमाण्डौ – तपाईँ यूएईमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट लेख्दा ख्याल गर्नुहोस् । यूएई प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई गा’लीग’लौज वा हो’च्चाएर कमेन्ट नग’र्न चेतावनी दिएको खबर गल्फ न्युजले लेखेको छ । सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरुमा लेखिने कमेन्टहरुमा पनि विशेषगरी अरुको मा’नहानी हुने र नि’न्दा गरेर लेखिएका कमे’न्टमा जे’ल स’जाय र ज’रिबाना वा दुबै सजा’य हुने जनाइएको छ ।
यस्तो कमेन्ट गर्नेहरुलाई २ लाख ५० हजार यूएई दिर्हामदेखि पाँच लाख दिर्हामसम्म जरि’बाना हुन सक्नेछ । ल नम्बर ५ २०२० को धारा २० ले सा’इबर अ’परा’ध हुन नदि’न जसले यस्ता क्रिया’कलाप गर्छन् उनीहरुलाई सजा’य गर्ने भएको हो । त्यसका लागि टेलिकमको ने’टवर्क वा अन्य कुनै आईटी प्रविधिको प्रयोग गर्ने यूएई प्रहरी’ले जनाएको छ ।
यूएई प्रहरीले २०१९ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत दु’र्व्यवहार बढेको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरु’पयोगमा विषेशगरी अन’लाइन दुव्र्य’वहार, ध’म्की र ब्या’ल्कमेल, झु’टो समाचारको प्रकाशन र प्रशारण, अरुको निजी मा’मलामा ह’स्तक्षे’प, दु’र्व्यवहारज’न्य क’मेन्ट गर्नु, झु’टो विज्ञापन पोस्ट गर्ने लगायत रहेका छन् ।
अप्रिल महिनाको सुरुमा सामाजिक सञ्जालको दुरु’पयोग गर्ने दुईजना प’क्राउ परेका थिए । उनीहरुले नैति’कतामा अ’सर गर्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा भि’डियो पोस्ट गरेका थिए । यो पो’स्ट देशभरी नै भाइरल भएको थियो । यूएईले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कुनै पनि सामग्री पोस्ट गर्दा उत्तरदायी र नै’तिकवान हुनपर्ने बताएको छ । सामाजिक स’ञ्जालमा बालबालिका र युवाको ठूलो पहुँच हुने भएकाले सामा’जिक सञ्जालमा केही लेख्नुअघि, फो’टो र भि’डियो पोस्ट गर्नुअघि सचेत हुन आग्रह पनि गरिएको छ ।
आबुधाबी प्रहरीले सर्वसाधारण व्यक्तिलाई आँ’च पुग्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि कुरा न’लेख्न चेतावनी दिएको छ । लाइ’न, ‘साइन, सि’म्बोल, फोटो, अडियो भिडियो कुनै पनि सामग्री जसले पब्लि’कलाई असर गर्छ त्यस्ता सामग्री पोस्ट गरेमा क’डा का’रबाही हुनेछ । त्यसैले तपाईँ पनि यूएईमा हुनुहन्छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा, कमेन्ट लेख्दा, फोटो, भिडियो पोस्ट गर्दा सचेत हुनुहोला । उज्यालो अनलाईन बाट
१० वर्षभित्र नेपाललाई एसियाको सम्पन्न देश बनाउने लक्ष्यमा छौं- सञ्चारमन्त्री
March 31, 2022 Nepali Surya